Semalt: I-Mirai (DDoS) Umgaqo woMthombo kunye nendlela yokuKhusela
Emva kokuphuhliswa kwekhowudi esetyenziselwa ukwenza i-hack enkulu kwi-Intanethi, i-Artem Abgarian, i-The Semalt Umphathi oyiNtloko kuMphathi weNtsebenzo, ukholelwa ukuba siqala ukuhlaselwa kwamanye amaninzi e-intanethi. Abaphuhlisi bekhowudi yenzelweukujolisa izixhobo ezixhunyiwe ezingaxhunyiwe. Ezi zinto ziquka iikhamera, ii-routers, ii-fowuni kunye nezinye iifowuni. Ikhowudi iyayibonisakwaye uguqula "kwi-bots bots", ekujoliswe kuyo kwiiwebhusayithi ngenjongo yokubakhoda ngaphandle kwe-intanethi.
Abahlalutyi bezokhuseleko bewebhu babiza ikhowudi "Mirai". Kwakukho emva kokuhlaselwa okuphawulekayokwiwebhsayithi ye-blogger ye-blogs ethi Krebs On Security. UBrian Krebs ngumcebisi wezokhuseleko kunye ne-blogger yezilwanyana. Wagqamisa ukupapashwaikhowudi eyabonakala kwidibanti yabaduni beveki edlulileyo.
Kwesinye seziqendu zakhe, uKrebs waxwayisa ngokuhlaselwa okongeziweyo kwi-IntanethiIzinto (IoT) zixhobo. Hackers, obhekene nalezi zihlaselo basebenzisa la madivaysi ukuba bombard website nge izicelo, ukwakha ezaneleyo ithrafikhiilayishe iiseva. Ngenxa yokungakwazi ukubonisa zonke iindwendwe zabo ngeemfuno abazifunayo, i-website iyakususa ekugqibeleni.
Abahlaseli baye basebenzisa i-DDoS ukuhlaselwa kwangaphambili ukuze banqamle iiwebhusayithi. II-UK yilizwe lesibili elijoliswe kuyo emva kweUnited States. 'Ukuhlaselwa kweDDoS kukujoliswe kumashishini athile, amaseva okanye iiwebhusayithi. Ziyiyouchungechunge okanye inethiwekhi ye "botnets" esebenza kunye ukwenza izicelo ezilula kwiwebhusayithi..Bacela ulwazi ngexesha kanye kunyei bombard kuze kube yilapho ikhulula kwaye ingakwazi ukusebenza.
Ukuba i-hacker iyakwazi ukuphawula isixhobo esichaphazelekayo esidibanisa kwi-intanethi.Bayakwazi ukuzinzisa ezi zinto zikhuselekileyo ukuba bazigqumise ukuba baqhagamshelane nomncedisi omkhulu. Engaziwa kumsebenzisi, ukwenza ukuhlaselwaUkusebenzisa ezi zixhobo kukunyusa kakhulu impembelelo.
Kwiimeko ze-Krebs, ukuhlaselwa kweDDoS kwatyelela i-Krebs kwiwebhusayithi yoKhuseleko ngokupheleleyoama-gigabytes angama-620 wedatha ngowesibili. Ingaphezulu kwaneendlela ezaneleyo zokuthatha amaninzi amaninzi kwiwebhusayithi ngoku.
UBrian Krebs, umnini, uxelele ukuba i-malware ye Mirai isasazeka kulaba basengoziniizixhobo ngokukhawulela i-intanethi ukukhangela amacebo e-IoT ekhuselwe izicwangciso zefomathi ezingagqibekanga, okanye amagama abasebenzisi abakwikhowudi kunye namaphasiwedi.
Imvelaphi kunye nomnini wekhowudi ahlale engaziwa. Nangona kunjalo, umntuwenza ikhowudi yeposi esebenzisa igama lomsebenzisi "Anna-senpai". Bathi baqeshwe baza bafumana ukulawula kwamawaka amadivayisi njengeenqwelo zabo.Kwi-intanethi ye-intanethi, i-hacker yathi amanyathelo athathwe ngamawebhusayithi ahlambulule izenzo zawo zenze i-dentukusebenza kwe-malware. Nangona kunjalo, ikhowudi iyaqhubeka nokufumana ezininzi izixhobo.
Siyabonga kwi-malware ye-Mirai, izigidi zamashishini axhunyiwe ezixhatshaziweyo zimiabasengozini yokulawulwa ngunyanzeliso ngabagculeli kwaye bajika baba yi-botnets ukujolisa kwiwebhusayithi. Ingxoxo kunye ne-MailOnline, uTony Anscombe we-AvastUkhuseleko luthi zonke izixhobo zikhonza njengendawo yokufikelela kwabakhonkco. Ibuza umbuzo ngendlela abavelisi kunye nayoAbasebenzisi ba khusele ezi zixhobo.
Enye yezona ndlela zindlela ezifanelekileyo zokugcina izakhono zabo kukugcina izixhobo zaboup-to-date kwaye uhlale ukhangele naluphi na ukukhishwa ngabavelisi. Okwesibini, ilogi ekhuselekileyo ngeenkcukacha kunye negama lomsebenzisi kunye nephasiwedi, ehlukileyoukususela kwisetyenzisi esingagqibekanga yindlela efanelekileyo yokugcina ezi zixhobo zikhuselekile. Ekugqibeleni, abasebenzisi kufuneka basebenzise nayiphi na imveliso yomkhuseleko, esebenzayo kwiisixhobo, esinokukunceda ukukhusela ukuhlaselwa.